TTSweet: ဂျူဂျူ့ ဆင်ခြေ
နေ့အိပ်မက် January 19, 2010 at 1:59 PM
မြတ်နိုး January 19, 2010 at 3:08 PM
juu juu is so clever.
ချစ်ကြည်အေး January 19, 2010 at 3:22 PM
She 's smarter than we are ....Hee hee, I admit...:(
LOL. Children are really innocent and their thoughts are so simple.. :)
Unknown January 19, 2010 at 6:38 PM
So Clever Sweety.I love her so ever i come & Read about Ju Ju.
ပွင့်မြုးဇင် January 20, 2010 at 2:06 PM
Sweet thoughts bu Ju Ju...
chitsu January 20, 2010 at 4:31 PM
so clever and smart Ju Ju Lay..
Ju Ju lay ..
Fighting ... he he he :D .. dun worry .. aunty yunge is behind u .. he he he :D
ကိုပေါ January 21, 2010 at 12:15 AM
“ကုတင်ပေါ် မခုန်နဲ့ဆို တစ်ခါပြောရင်မရဘူး။ အခါခါပြော နောက်ဆုံးအမေ စိတ်တိုပြီး အော်တော့မှ ရပ်တော့တယ်။ ”
မဒမ်ပေါကို ဖတ်ပြရင်း ဒီနေရာရောက်တော့ မဒမ်ပေါက အိမ်ကသမီးအဖြစ်အပျက်နဲ့ အရမ်းတူလိုက်လေ လို့ မှတ်ချက်ချတယ်။
T T Sweet January 21, 2010 at 12:18 AM
Thank you Aunty Yunge and Aunty Chitsu.
သက်ဝေ January 21, 2010 at 12:37 AM
ဂျူဂျူတို့က အေးဆေးပဲ တဲ့...
ကျော်နှင်းဆီလွင် June 3, 2010 at 10:25 AM
မ သမီးကို တအားစိတ်ဝင်စားလာပြီ..